प्रतिक्षा गरौं, २६ जनवरीका
गतहप्ता अनलाइन खबरहरुमा ज्ञानेन्द्र शाह आउँदो जनवरी २६ का दिन भारतको नयाँदिल्लीमा हुने गणतन्त्र दिवस समारोहमा प्रमुख अतिथि हुने खबरले ठूलै चर्चा पायो । केही नाम चलेका र विश्वासनीय अनलाइनहरुमा समेत यो समाचार आएपछि विश्वास अझै हलक्क बढ्यो । त्यसो त अमेरिकीराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमपलाई भारतले निम्तो पठाएको थियो, तर रुससँग सामरिक डिल गरेपछि रुष्ठ अमेरिकाका राष्ट्रपति नआउने भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहको नामलाई केही भारतीय मिडियाले समेत उछालेका छन् । खासगरी विदेश मामिला र सुरक्षाका विषयमा बिना अनुमति भारतीय मिडियाहरुले हलुका पारामा लेख्ने गर्दैनन्, यसकारण पनि २६ जनवरीको प्रमुख अतिथिको कुरा त्यसै आएको होइन ।
राष्ट्रप्रमुखहरुलाई मात्र प्रमुख अतिथि बनाइने समारोहमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुन तरिकाले निम्त्याउने, कुन सम्मान दिने भन्ने बारे स्पष्ट हुनसकेको छैन । पछिल्लो पटक के आर नारायणनको राष्ट्रपति कालमा स्व. श्री ५ वीरेन्द्रले प्रमुख अतिथि बन्ने मौका पाएका थिए भन्नेहरु राजतन्त्र नभएको स्थितिमा नमिल्ने बताइरहेका छन् । त्यसो त अन्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि बनाएर विशिष्ट अतिथिका रुपमा नेपालका ज्ञानेन्द्र शाहलाई निम्त्याउन पनि मिल्छ, सन्देश दिन सकिन्छ भन्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् ।
यसै सेरोफेरोमा २०१९ मा हुने भारतको लोकसभा चुनावको तैयारीका लािग पनि हिन्दुराजाको उपयोग भारतको हिन्दुवादी दल र सरकारले गर्न खोजेको हुनुपर्छ भनेर विद्वता छाट्नेहरु धेरै भेटिन्छन् खासगरी स्वयम् कांग्रेस आइका अध्यक्ष राहुल गाँधी देव देवालय हिन्दु तीथर्हरु घुम्न थालेपछि, प्रादेशिक चुनावहरु, अहिले भइरहेका, मा पूजापाठतिर ध्यानदृष्टि दिन थालेपछि भारतको हिन्दुवादी केन्द्रीय सरकारलाई आपत परेको हुनसक्ने तर्क पनि धेरैको छ । विपक्षी कांग्रेस आईले अल्पसंख्यक समुदायको साथसाथै हिन्दु मतदाताहरुलाइृ आकर्षित गर्नका लागि आफ्ना अध्यक्षलाई काठमाडौं हुँदै कैलाश मानसरोवरको तीर्थाटनका लागि पठाएपछि, त्यो पनि नरन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणकै बखत, हिन्दुवादी भाजपाले हिन्दुराजातिर आँखा फर्काएको हुनुपर्छ भन्नेहरुको कमी छैन । तथापि नेपाल र ारतका मिडियाहरुमा यो खबरले चर्चा पाए पनि कुनै आधिकारिक निकायले यसको पुष्टि गरिसकेका छैनन् । न त नेपालस्थित भारतीय दूतावासले, न त त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले नै । तैपनि हल्ला चलि नै रहेको छ । केही जानकाररु भन्छन्– सम्भाबना नकार्न सकिन्न । भारतका शासकहरु अनेक खेल खेल्न माहिर हुनेगरेका छन् ।
नेपालका सत्ताधारी भने घुमाएर नेपालको संविधानलाई मान्यता दिइसकेको भारतले आफ्नो पुरानो अभ्यास तोड्न मुस्किल छ । ज्ञानेन्द्र शाहको ख्याती नेपालमा ह्वात्तै बढेको सन्दर्भमा बदनाम गर्न त यस्तो हल्ला चलाइएको होइन ? कि निम्तो पाएर पनि ज्ञानेन्द्र शाहले जवाफ नै नदिएका हुन् ? स्मरणीय छ, आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि विनोद चौधरीसम्मलाई निम्तो दिने नरेन्द्र मोदीले चुनाव जित्न नेपालको हिन्दुत्वको लाभ उठाउन नखोज्लान भन्न सकिन्न । यसकारण हिन्दुत्वको लाभ उठाउन भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीले यू टर्न नलेलान् भन्न सकिन्न ।
नेपालको राजनीतिमा पहिलेका राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज पनि जाज्वल्यमान लोकप्रीयतामा छन् । यसपालीको दशैंमा टीका थाप्न जाने भीडले पनि त्यो प्रमाणित हुन्छ । दलहरुले खुला रुपमा सवीकार्न नसके पनि एकताको कडी चाहिने रहेछ भन्ने आत्मानुभूति सबैले गरिसकेका छन् । संविधान जारी भयो, संविधानअनुसार तीन तहको सरकार पनि बनिसक्यो तर संघीयता चलाउन सकिन्न भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । कूशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नआएपछि र राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएकाले पनि राजसंस्था त चाहिने रहेछ भन्ने अधिकांशको ठहर भइसकेको अवस्था छ ।
यसपालीको अष्टमीमा ज्ञानेन्द्र शाहले शक्तिपीठहरको नियमित दर्शन गरे । यस पूजापाठ भ्रमणमा आमनागरिकले लगाएको जयजयकारको नाराले समेत संविधान होइन, राजसंस्था बढी आवश्यक भएको देखियो ।
आमअनुभूति छ, राष्ट्रियता कमजोर भो । शासनव्यवस्था निर्धो देखियो । नेपाल नै समाप्त पार्ने चलखेल भइरहेको छ । सिमानामा दिनहँु साँघुरिदै गएको छ । प्रदेश सरकारहरु राष्ट्रविरोधी निर्णय गर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि नेपालीको ढाड सेक्नेगरी काम गर्नथालेका छन् । सुरक्षा व्यवस्था साह्रै खस्कदै गएको छ । यसकारण देश राजा नभएको देश भयो, सामाजिक बिकृति बढेर गयो । सिंहदरवार, शीतल निवासको ख्याति, नाकावन्दीका बेलामा ओलीको जुन छवि थियो, त्यो छवि विदेशीकरण भइसकेको छ ।
यसकारण भारतले नागरिकका रुपमा भए पनि गणतन्त्र दिवसमा निम्त्यायो भने नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको छिटोभन्दा छिटो पुनस्र्थापना हुनसक्छ । खुला सिमानाका र दैनिक सम्बन्धका कारणले समेत भारत नेपालको छिमेकी हो र छिमेकीको ठूलो प्रभाव त पर्छ पर्छ । भारतले नयाँ सम्बन्धको सुरुआत गरिदियो भने नेपाल र भारतको मित्रतामा नयाँपन आउनेछ ।
यसकारण २६ जनवरीको प्रतिक्षा गरौं । हावा नचली हल्लाकै भरमा पात हल्लिएको त होइन होला ।